कञ्चनको होस् आउदा डाक्टरले सुई लगाएर किन गरे बिहोस? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कञ्चनको होस् आउदा डाक्टरले सुई लगाएर किन गरे बिहोस?
कन्चनको अहिले केहि सु’धार भइरहेको र उनको हो’स् खुलेको उनको आ’फन्तले जनाएका छन । उनले धेरै बि’ष से’वन गरेको का’रण उनलाई ठि’क हुन् अ’झ स’मय ला’ग्ने स’मेत आ’फन्तको भ’नाई रहेको छ । यस उ’पचारमा धेरै ख’र्च भ’इसकेको र अ’झ हुने आ’फन्तको भ’नाई रहेको छ । यस घ’टनामा क’न्चनको उपचारमा धेरै खर्च लाग्ने भएकोले केहि सहयोगी मनहरुले यसरी सहयोग गरेका छन ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
बलिउड लाई नै फरक शैलीमा मोड्न बाध्य बनाउने यी अभिनेता आखिर किन परिवार सहित भारत छोड्दै छन् ?